CHG - Usoro eji
Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na Usoro eji, kwụsịrị iji saịtị ahụ ozugbo!
Site n'iji saịtị a, ị na-egosi Nnyekọ na Agreement na Usoro Okwu a. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na Usoro Okwu a, anaghị eji saịtị ahụ.
Mgbochi na iji ihe onwunwe eme ihe
Ihe ndị dị na ebe nrụọrụ weebụ a bụ ndị nweburu ikike na ikike niile echekwara. A na-edekwa ya, ederede, eserese, databases, koodu HTML, na ihe ọgụgụ ndị ọzọ nwere ọgụgụ isi site na UK na International Copyright Laws, na-enweghị ike depụtaghachi, depụtagharịa, bipụtara, reengineered, sụgharịrị, kwadoro, ma ọ bụ na-ekesa n'ụzọ ọ bụla n'emeghị ikikere. Niile ụghalaahia na saịtị a bụ ụghalaahịa nke CarlHenryGlobal.com ma ọ bụ nke ndị nwe ndị ọzọ jiri ikikere ha.
Njikwa Njikwa, License, na Jiri
CarlHenryGlobal.com kwadoro, ma nabatara, na CarlHenryGlobal.com nwe nwe ikikere nke Databases of Links to articles and resources available from time to time via http://www.CarlHenryGlobal.com. CarlHenryGlobal.com na ndị na-akwado ya na-edebe ikike niile ọ bụla ma ọ bụghị ikike ikike ọgụgụ isi na nkwekọrịta a.
CarlHenryGlobal.com nyere gị ikikere nke na-abụghị nke na-abụghị nke a na-enweghị ike ịgbanwe iji nweta nchekwa data (s) nwere ike ịnweta gị n'okpuru Usoro na Ọnọdụ ndị a. Enwere ike iji nchekwa data (s) naanị maka ịlele ozi ma ọ bụ maka iwepụta ozi ruo n'ókè akọwapụtara n'okpuru.
Ị kwenyere iji ozi nwetara site na ọdụ data data CarlHenryGlobal.com naanị maka iji onwe gị ma ọ bụ nzube nke ụlọ gị ma ọ bụ azụmahịa, ọ bụrụ na nke a abụghị nke ere ma ọ bụ na-ezipụ ozi, na enweghị ihe kpatara ya ma ọ bụ ikike ka e bipụtara, bipụtara , ebudatara, ebute, kesaa, reengineered, ma ọ bụ mepụtaghachi ụdị ọ bụla nke ọdụ data (ma ọ bụ ma ọ bụ na condensed, nhọrọ ma ọ bụ tabulated form) ma ọ bụ maka nzagharị, republishing, redistribution, nlele, ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ.
Ka o sina dị, ị nwere ike ịnwe na obere oge ị nwere ike ibudata ma ọ bụ bipụta ibe nke ozi nke a na-ahọrọ n'otu n'otu, iji zute ihe dị mkpa, nke nwere ike ịchọpụta ozi nke bụ maka ojiji nkeonwe gị, ma ọ bụ maka iji ya na azụmahịa gị naanị, na nzuzo nzuzo. Ị nwere ike ịme ọnụ ọgụgụ dị otú ahụ dị ole na ole nke mbipụta ọ bụla, ma na mpempe akwụkwọ ma ọ bụ ụdị edemede siri ike, dịka ọ ga-abụ ihe ezi uche maka nzube ndị a. Ọ dịghị ihe dị n'ime a ga-enye gị ikike ịmepụta nchekwa data ọ bụla, ndekọ ma ọ bụ mbipụta siri ike nke e bipụtara ma ọ bụ site na databasesị, ma maka nkesa n'ime ma ọ bụ nkesa ma ọ bụ iji.
A na-enye ihe ndị dị na saịtị a "dị ka" ma na-enweghị akwụkwọ ikikere nke ụdị ọ bụla ma ọ bụ ekwupụta ma ọ bụ gosipụta. CarlHenryGlobal.com na-ahapụ akwụkwọ ikike niile, kwupụta ma ọ bụ gosi, gụnyere, ma ọ bụghị njedebe na, akwụkwọ ikike nke ahịa na ike maka otu nzube. CarlHenryGlobal.com anaghị ekwenye na ọrụ ndị dị na ihe ndị ahụ ga-egbochi ma ọ bụ enweghị ntụpọ, na a ga-edozikwa ntụpọ, ma ọ bụ na saịtị a ma ọ bụ nkesa na-eme ya dị na enweghị onwe ya na nje ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ. CarlHenryGlobal.com anaghị enye ikike ma ọ bụ mee ihe ọ bụla gbasara ihe eji ma ọ bụ nsonaazụ ojiji nke ihe ndị dị na saịtị a maka okwu ziri ezi, eziokwu, ntụkwasị obi, ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ. Ị (ma ọ bụghị CarlHenryGlobal.com na-efu ụgwọ niile nke ọrụ, ịrụ ọrụ ma ọ bụ mgbazi dị mkpa. Iwu nwere ike ghara ikwe ka iwepụ nke akwụkwọ ikike ahụ, ya mere nhichapụ ahụ nwere ike ọ gaghị emetụta gị.
N'ọnọdụ ọ bụla, gụnyere, ma ọ bụghị njedebe na, ilegharaghị anya, CarlHenryGlobal.com ga-akwụ ụgwọ maka ihe ọ bụla pụrụ iche ma ọ bụ mbibi bara uru nke sitere na iji, ma ọ bụ enweghị ike iji, ihe ndị dị na saịtị a, ọ bụrụgodị na CarlHenryGlobal.com ma ọ̄ bụ A gwawo onye nnọchiteanya nke CarlHenryGlobal.com ikikere na o nwere ike imebi ihe ndị dị otú ahụ. Iwu nwere ike ghara ikwe ka njedebe ma ọ bụ wepụ nke ọrụ ma ọ bụ mmebi ma ọ bụ ọdachi dị na ya, ya mere, njedebe ma ọ bụ nhichapụ n'elu nwere ike ọ gaghị emetụta gị. O nweghị ihe ga - eme ka CarlHenryGlobal.com nye gị ụgwọ niile, ma ọ bụ na - eme ihe, ma ọ bụ na - emeghị ihe ọ bụla, ma ọ bụ na - akwụghị ụgwọ ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ) karịa ego ị ga - saịtị a.
Eziokwu na ozi dị na weebụsaịtị a kwenyere na ha ziri ezi n'oge a na-edebe ha na weebụsaịtị. Enwere ike ime mgbanwe n'oge ọ bụla na-enweghị ọkwa. A ga-eji data niile enyere na ebe nrụọrụ weebụ a maka naanị ihe ọmụma. Ihe ọmụma dị na weebụsaịtị a na ibe n'ime ya, abụghị iji nye ndụmọdụ iwu, ego ma ọ bụ ụtụ isi, ma ọ bụ ndụmọdụ ọ bụla, ihe ọ bụla, maka onye ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ ma ghara ịdabere na ya. A na-enye ọrụ ndị a kọwara na saịtị weebụ a n'ókèala ebe a ga-enye ha iwu n'ụzọ iwu kwadoro. Ozi e nyere na ebe nrụọrụ weebụ anyị anaghị ejikọta ya niile, ma ọ bụ naanị ozi a na-enweta maka CarlHenryGlobal.com na ozi ndị a ekwesịghị ịdabere dị ka ihe niile ma ọ bụ ihe ziri ezi.
Njikọ na akara
Onye nwe nke saịtị a abughi nke ejikọrọ na saịtị ndi nwere ike jikọta na saịtị a ma obughi ihe maka ọdịnaya ha. Njikọ ndị a jikọtara ya bụ maka ọdịmma gị nanị ma ịnweta ha na ihe ize ndụ gị. Njikọ na ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ ma ọ bụ ịkọ aka na ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ mbipụta ndị ọzọ karịa nke CarlHenryGlobal.com na ndị enyemaka ya na mmekọ na weebụsaịtị a, egosighị nkwado ma ọ bụ nkwado nke weebụsaịtị, ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ mbipụta site na CarlHenryGlobal.com ma ọ bụ ndị enyemaka ya na mmekọ.
Ụfọdụ aha, eserese, logos, akara ngosi, atụmatụ, okwu, utu aha ma ọ bụ ahịrịokwu na weebụsaịtị a nwere ike ịbụ aha ahia, ụghalaahia ma ọ bụ akara ọrụ nke CarlHenryGlobal.com ma ọ bụ nke ndị ọzọ. Ngosipụta nke ụghalaahia na weebụsaịtị a apụtaghị na e nyere ikike nke ụdị ọ bụla. Nbudata ọ bụla na-enweghị ikikere, ntanyeghachi, ma ọ bụ ndenyegharị nke mgbanwe nke ụghalaahia na / ma ọ bụ ọdịnaya dị n'ime ebe a nwere ike ịbụ mmebi nke iwu ejiri mara iwu obodo na / ma ọ bụ iwu nwebisiinka ma nwee ike ịdebe onye na-ede akwụkwọ ka ọ rụọ ọrụ iwu.
Nkwenye nke Usoro, Okwuntughe na Ozi
Ị kwenyere na ị na-emeso dịka nzuzo na nzuzo ọ bụla Code Subscriber, aha njirimara, ID njirimara, ma ọ bụ paswọọdụ ị nwere ike ịnata site na CarlHenryGlobal.com, yana ozi niile ị nwere ike ịnweta site na ebe nchekwa echekwara nke weebụsaịtị CarlHenryGlobal.com. emeghị ma ọ bụ kwe ka ọmụma ọ bụla, kọwaa ma ọ bụ kpugheere onye ọ bụla ọzọ ihe ọ bụla.
Ihe ndị ọzọ gbasara iwu
Usoro Okwu a ga-etinye aka na ohere ọ bụla ị ga - enweta na http://www.CarlHenryGlobal.com. CarlHenryGlobal.com nwere ikike ịnye ntinye anya na Usoro Ojiji a site na ibipụta nsụgharị nke akwụkwọ a na saịtị a: nke ahụ ga-etinye ya n'ọrụ niile ị na - esote mgbe e bipụtara ya. Nweta ohere nke ozi sitere n'aka CarlHenryGlobal.com ga-abụ ihe dị iche iche, azụmahịa dị iche iche dabara na usoro ahụ.
Usoro Iwu a na ikike a nyere ka ọ bụrụ na ị gaghị enye gị aka ma ọ bụ mee ka gị onwe gị nwee ike na-enweghị nnabata ederede CarlHenryGlobal.com n'ọdịnihu.
Usoro okwu a ga-achịkwa ya, mee ya ma mee ka ọ dịka iwu nke London UK, dịka a na-etinye aka na nkwekọrịta ndị abanye na a ga-arụ ọrụ n'ime ikike dị otú ahụ.
Ruo n'ókè ị nwere n'ụzọ ọ bụla mebiri ma ọ bụ na-eyi egwu imebi CarlHenryGlobal.com na / ma ọ bụ ya mmekọ'ikike ọgụgụ isi, CarlHenryGlobal.com na / ma ọ bụ ya mmekọ nwere ike ịchọ enyemaka ma ọ bụ enyemaka ndị ọzọ kwesịrị ekwesị na steeti ọ bụla ma ọ bụ ụlọikpe gọọmenti etiti dị na steeti London UK, na ị kwenyere na ikike na ikike dị iche iche na ụlọikpe dị otú ahụ.
Ọ bụla ọzọ esemokwu ga-egbo dị ka ndị a:
Ọ bụrụ na esemokwu bilitere n'okpuru nkwekọrịta a, anyị kwetara ka anyị buru ụzọ gbalịa dozie ya site na enyemaka nke onye nkwekọrịta ọ bụla kwekọrịtara na ọnọdụ ebe a: London UK. Ihe ọ bụla ụgwọ na ụgwọ ndị ọzọ na-abụghị ụgwọ ụlọ iwu na-akwado ya na onye ọ bụla anyị ga-ekerịta.
Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịnweta ngwọta na-edozi afọ site na ntanetị, anyị kwenyere ka edozi esemokwu ahụ ka ọ bụrụ onye na-emechi iwu na ebe ndị ọzọ: London UK. A ga-abanye ikpe n'ụlọ akwụkwọ ọ bụla nke nwere ikike iji mee ya.
Ọ bụrụ na ndokwa ọ bụla nke nkwekọrịta a abaghị uru ma ọ bụ enweghị ike imezu ya n'ozuzu ya ma ọ bụ n'akụkụ, ihe ndị fọdụrụ na nkwekọrịta a agaghị emetụta ya.
Usoro nkwekọrịta Usoro a dị irè ruo mgbe otu ọ bụla ga-akwụsị. Ị nwere ike ịkwụsị nkwekọrịta a n'oge ọ bụla site n'ibibi ihe niile e nwetara site n'aka na http://www.CarlHenryGlobal.com (s) na akwụkwọ niile metụtara ya na akwụkwọ niile na nrụnye ya, ma emebere n'okpuru nkwekọrịta nke nkwekọrịta a maọbụ ma ọ bụghị. Nkwekọrịta a ga-akwụsị kpam kpam na CarlHenryGlobal.com naanị ezi uche, ọ bụrụ na ị gaghị eme ihe ọ bụla ma ọ bụ ndokwa nkwekọrịta a. Mgbe ị kwụsịrị, ị ghaghị ibibi ihe niile a na-enweta site na saịtị a na ihe ọ bụla ọzọ na saịtị http://www.CarlHenryGlobal.com na sistem niile, ma ọ bụ n'okpuru usoro nkwekọrịta a ma ọ bụ nke ọzọ.